June 2021 - ShwengweGames
June 30, 2021 by Shwengwe Games
တစ်ညလောက် အိပ်မပျော်ဘဲ အိပ်ရာပေါ် လူးလိမ့်နေရင်း အချိန်ကုန်သွားပြီဆိုလျှင် နောက်တစ်နေ့မနက်ကျ ဘယ်လိုခံစားရတော့မယ်ဆိုတာ သိကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ — ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်ကာ စိတ်မပါလက်မပါ ခံစားနေရတာတွေ အားလုံးပေါ့။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ ညအိပ်စက်အနားယူချိန် 7-9 နာရီမပြည့်ခဲ့လျှင် အားအင်ကုန်ခမ်းပြီး စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တာထက်ပိုတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်ခြင်းရဲ့ ရေရှည်ဆိုးကျိုးတွေက အမှန်တကယ်ရှိပါတယ်။
အိပ်ရေးမဝရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားအင်တွေကို ကျဆင်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမားရေးကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များက ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအား နိမ့်ကျခြင်းတို့လို ကျန်းမာရေးပြဿနာ အတော်များများကို အိပ်ရေးပျက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
နာတာရှည်အိပ်ရေးပျက်ခြင်းကလည်း diabetes mellitus (ဆီးချိုရောဂါ) နှင့် နှလုံးရောဂါကဲ့သို့သော နာတာရှည်ရောဂါများ​ ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးပွားစေပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်ပြဿနာများ – အိပ်ပျော်နေချိန်မှာ ဦးနှောက်က အချက်အလက်အသစ်တွေကို အစီအစဉ်တကျ မှတ်သားနိုင်အောင် ဆက်သွယ်မှုများကို ဖွဲ့စည်းပေးပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းက ရေရှည်နှင့် ခဏတာမှတ်ဉာဏ် (၂) ခုလုံးအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။
စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ – အနားယူချိန် အလုံအလောက်မရတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ တီထွင်နိုင်စွမ်းနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းတွေက အရင်လောက် မတိုးတက်တော့ပါဘူး။
စိတ်ခံစားမှု အပြောင်းအလဲများ – အိပ်ရေးပျက်ခြင်းက သင့်ကို စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ထိခိုက်လွယ်ခြင်းနှင့် စိတ်တိုလွယ်ခြင်းတို့ကို ခံစားရစေပါတယ်။ နာတာရှည်အိပ်ရေးပျက်ခြင်းက သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ထိခိုက်စေပြီး anxiety နှင့် depression များကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာ ကိုယ်ခံအားစနစ်က antibodies နှင့် cytokines တို့လို ပိုးဝင်ခြင်းမှ ကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ ၎င်းတို့ကိုသုံးပြီး ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်တို့လို ပြင်ပက ဝင်ရောက်ကျူးကျော်လာတဲ့အရာတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်။ အချို့သော cytokines တွေက အိပ်ပျော်စေဖို့ ကူညီပေးပြီး ဖျားနာမှုတွေမှ ကာကွယ်ဖို့ ပိုမိုထိရောက်စေပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်ခြင်းက သင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ရဲ့ အင်အားတွေ တည်ဆောက်ခြင်းကို တားဆီးပစ်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်အလုံအလောက်မရတဲ့အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဝင်ရောက်ကျူးကျော်လာတဲ့ရောဂါတွေကို မတိုက်ထုတ်နိုင်တော့တဲ့အပြင် နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ အချိန်ပိုယူရပါတယ်။
အိပ်ရေးအနည်းငယ်ပဲပျက်ခြင်းကတောင် ကိုယ်ခံအားစနစ်တွေကို ချို့ယွင်းစေကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကြီးမားသော လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ လူတွေကို nasal drops ကနေတစ်ဆင့် အအေးမိစေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေပေးပြီးတဲ့အခါ အအေးမိရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ အိပ်ချိန် 7နာရီအောက်နည်းတဲ့သူတွေက အိပ်ချိန် 8နာရီနှင့်အထက်ရသူတွေထက် အအေးမိနိုင်ချေ 3ဆ ပိုမိုများကြောင်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အကယ်၍ သင်က မကြာမဏ အအေးမိတတ်တယ်ဆိုလျှင် တစ်ညကို အိပ်ချိန်အနည်းဆုံး 8နာရီရအောင် ကြိုးစားကြည့်တာက လုံးဝအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
အိပ်ရေးမဝခြင်းက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ insulin ဟော်မုန်း ထုတ်လွှင့်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်။ အိပ်ချိန် အလုံအလောက်မရတဲ့သူတွေမှာ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်တွေ ပိုမြင့်တက်နေပြီး ဆီးချိုရောဂါ type2ဖြစ်နိုင်ချေလည်း ပိုများပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်ခြင်းက သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်စေခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်မှု မြင့်မားစေခြင်းများကို ဖြစ်စေလို့ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွါးနိုင်ခြေပိုများစေနိုင်ပါတယ်။
အနုပညာရှင်တွေ အများစုကတော့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ အပြည့်အဝရပ်တည်ခဲ့ကြပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်တွေ ကျော်ကြားမှုတွေကို မေ့ကာ ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်း လမ်းမပေါ်အထိထွက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ ။
ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့အကောင့်တွေကနေလည်း အစွမ်းကုန်နေ့ရောညပါ soeak out တွေလည်း လုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါ့ကြာင့်လည်း ပုဒ်မ (၅၀၅-က) နဲ့ တရားစွဲဆိုခံရသူတွေ ရှိသလို တစ်ချို့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေဆို ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ကြပါတယ် ။
ဒီမနက်အစောပိုင်းလောက်မှာတော့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအပြင် အခြား နိုင်ငံရေးသမားများကို လွှတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အားလုံးကလည်း ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်နေခဲ့ကြသလို တစ်ချို့ဆို လွှတ်ပေးမယ့် နာမည်စာရင်းတွေပါ ကြိုသိနေကြသလို ပိုတောင် ရင်ခုန်နေကြတာတွေရှိနေပါတယ် ။ အခုလည်း တစ်မနက်လုံး အားလုံး မျှော်လင့် စောင့်စားနေကြတဲ့အတိုင်း မေတိုးခိုင်တော့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကာအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။ မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မိတာကြောင့် ပရိသတ်ကြီးအတွက် သတင်းကောင်းလေးကို ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
Credit Yuan – Cele Zone
Photo – Htein Htein Thar
ပုဒ်မ ၅၀၅ က အမှုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးလိုက်တဲ့အထဲမှာ ညီမ ဖြစ်သူပါဝင်ခဲ့လို့ပျော်နေတဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း
မအေးသောင်းလို့ အများက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ ပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့် ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူခြင်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ဇွန်လ(၂၉)ရက်နေ့ညမှာတော့ ပုဒ်မ ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့်တရားစွဲခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်(၂၄)ယောက်ကို အမှုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးလိုက်တဲ့အကြောင်း စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းဌာနတွေက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအထဲမှာ မအေးသောင်းကလည်း ပါဝင်လာပါတယ်..။
​အဆိုပါသတင်းကြောင့် ကာယကံရှင်မိသားစုဝင်တွေအပြင် ပြည်သူပရိသတ်တွေကပါ ဝမ်းသာနေကြပြီး ညီမဖြစ်သူ မအေးသောင်းအတွက် နှင်းဝတ်ရည်သောင်းကလည်း ဝမ်းသာနေရတဲ့အကြောင်း စာလေးရေးကာ ပြောပြလာပါတယ်..။“I am so happy finally she is home . Home time baby. Home time .love you su ma 😍😘🌷💐..””Su maaaaaaa . Ma g is so happy 😘😍..” ဆိုပြီး ညီမဖြစ်သူအတွက် အပျော်လေးတွေကို ရေးသားပြောပြ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ညီအစ်မသူံးယောက်ထဲက အငယ်ဆုံးလေးဖြစ်တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းကလည်း အစ်မအတွက် ဝမ်းသာသလို အားလုံးအတွက်လည်း ဝမ်းသာနေရတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြထားပါသေးတယ်..။သူမတို့ရဲ့ပို့စ်အောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေကလည်း မအေးသောင်းနဲ့အတူ အမှုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခံရတဲ့ အခြားအနုပညာရှင်တွေအတွက် ဝမ်းသာနေကြတဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း မှတ်ချက်တွေ ပေးထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
မေအးေသာင္းလို႔ အမ်ားက ခ်စ္စနိုးေခၚၾကတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာ ေအးဝတ္ရည္ေသာင္းကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲႀကီးမွာ ျပည္သူေတြဘက္က ရပ္တည္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၅၀၅ က ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူျခင္းခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြထဲက တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္..။ဇြန္လ(၂၉)ရက္ေန႔ညမွာေတာ့ ပုဒ္မ ၅၀၅ က ျဖင့္ အမႈဖြင့္တရားစြဲခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္(၂၄)ေယာက္ကို အမႈျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းေပးလိုက္တဲ့အေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီရဲ့သတင္းဌာနေတြက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီအထဲမွာ မေအးေသာင္ းကလည္း ပါဝင္လာပါတယ္..။
​အဆိုပါသတင္းေၾကာင့္ ကာယကံရွင္မိသားစုဝင္ေတြအျပင္ ျပည္သူပရိသတ္ေတြကပါ ဝမ္းသာေနၾကၿပီး ညီမျဖစ္သူ မေအးေသာင္းအတြက္ ႏွင္းဝတ္ရည္ေသာင္းကလည္း ဝမ္းသာေနရတဲ့အေၾကာင္း စာေလးေရးကာ ေျပာျပလာပါတယ္..။“I am so happy finally she is home . Home time baby. Home time .love you su ma 😍😘🌷💐..””Su maaaaaaa . Ma g is so happy 😘😍..” ဆိုၿပီး ညီမျဖစ္သူအတြက္ အေပ်ာ္ေလးေတြကို ေရးသားေျပာၿပ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္..။
ညီအစ္မသူံးေယာက္ထဲက အငယ္ဆုံးေလးျဖစ္တဲ့ ဆြိဝတ္ရည္ေသာင္းကလည္း အစ္မအတြက္ ဝမ္းသာသလို အားလုံးအတြက္လည္း ဝမ္းသာေနရတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာျပထားပါေသးတယ္..။သူမတို႔ရဲ့ပို႔စ္ေအာက္မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြကလည္း မေအးေသာင္းနဲ႔အတူ အမႈျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းခံရတဲ့ အျခားအႏုပညာရွင္ေတြအတြက္ ဝမ္းသာေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းေတြကိုလည္း မွတ္ခ်က္ေတြ ေပးထားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္..။
၅၀၅(က)ပုဒ်မ ဝရမ်းထုတ်ခံထားရသူတစ်ချို့ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးရအောင်အပြစ်လုပ်ထားတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလိုက်တဲ့ မေဦး
Makeup လောကမှာ နာမည်ကြီး လူကြိုက်များတဲ့ မေဦးကတော့ အောင်မြင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မေဦးက အလှအပတွေဖန်တီးတဲ့လက်နဲ့ပဲ အခုနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေကိုင်ပြီး တတ်နိုင်တဲ့နေရာကနေပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလောမှာတော့ မေဦးက လုံခြုံစိတ်ချရမယ့်နေရာမှာရှောင်တိမ်းနေထိုင်နေရပေမယ့် တော်လှန်ရေးကိုတော့ အားမလျော့သွားဘဲ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ ပြည်သူ(၂၀၀၀)ကျော် ပြန်လွှတ်မယ်လို့ သတင်းထွက်နေတာကြောင့်အကုန်လုံးက ရင်ခုန်စွာစောင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ညကဆိုရင် ၅၀၅ (က)ပုဒ်မနဲ့ ဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့အနုပညာရှင် (၂၄)ဦးကိုလည်း စစ်ကောင်စီက အမှုရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာရှင်တချို့ကိုအခုလိုအမှုရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တဲ့အခြေ အနေအပေါ် ပြည်သူလူထုက ဝမ်းသာကြပေမယ့် သူတို့အမြင်လေးတွကိုလည်းလူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အမျိုးမျိုးရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
မေဦးကတော့ ၅၀၅(က)ပုဒ်မနဲ့ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့သူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးရအောင် အပြစ်လုပ်ထားတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မေဦးရဲ့ပြတ်သားတဲ့စကားတစ်ခွန်းကိုပြည်သူတွေကလည်း ထောက်ခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာတောင် သူ့ရဲ့ခံယူချက်အတိုင်း ရင်ထဲကစကားတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုနေတတ်တာကြောင့် မေဦးရေးသားထားတဲ့ စာလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Source&Photo Credit:May Oo’s Facebook Acc
၅၀၅ (က)ပုဒ္မ ဝရမ္းထုတ္ခံထားရသူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းေပးရေအာင္ အျပစ္လုပ္ထားတာဘာတစ္ခုမွမရွိဘူးလို႔ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာလိုက္တဲ့ ေမဦး
Makeup ေလာကမွာ နာမည္ႀကီး လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ေမဦးကေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ေမဦးက အလွအပေတြဖန္တီးတဲ့လက္နဲ႕ပဲ အခုေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ ဆိုင္းဘုတ္ေလးေတြကိုင္ၿပီး တတ္နိုင္တဲ့ေနရာကေနပါဝင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။လတ္တေလာမွာေတာ့ ေမဦးက လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမယ့္ေနရာမွာေရွာင္တိမ္းေနထိုင္ေနရေပမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးကိုေတာ့ အားမေလ်ာ့သြားဘဲ ျပည္သူေတြနဲ႕အတူ တစ္သားတည္းရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႕မနက္ပိုင္းမွာ ေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူ(၂၀၀၀)ေက်ာ္ ျပန္လႊတ္မယ္လို႔ သတင္းထြက္ေနတာေၾကာင့္အကုန္လုံးက ရင္ခုန္စြာေစာင့္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။မေန႕ညကဆိုရင္ ၅၀၅(က)ပုဒ္မနဲ႕ ဝရမ္းထုတ္ခံထားရတဲ့အႏုပညာရွင္ (၂၄)ဦးကိုလည္း စစ္ေကာင္စီက အမႈ႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။အႏုပညာရွင္တခ်ိဳ႕ကို အခုလို အမႈ႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္တဲ့အေျခအေနအေပၚ ျပည္သူလူထုက ဝမ္းသာၾကေပမယ့္ သူတို႔အျမင္ေလးတြကိုလည္းလူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသားေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
ေမဦးကေတာ့ ၅၀၅(က)ပုဒ္မနဲ႕ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံထားရတဲ့သူေတြကို ျပန္လႊတ္ေပးရေအာင္ အျပစ္လုပ္ထားတာဘာတစ္ခုမွမရွိဘူးဆိုၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ေမဦးရဲ႕ ျပတ္သားတဲ့စကားတစ္ခြန္းကိုျပည္သူေတြကလည္း ေထာက္ခံေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာင္ သူ႕ရဲ႕ခံယူခ်က္အတိုင္း ရင္ထဲကစကားေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုေနတတ္တာေၾကာင့္ ေမဦးေရးသားထားတဲ့ စာေလးကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
ဘော်လုံးပွဲ တစ်ပွဲကပေးလိုက်တဲ့ လူသားဆန်မှု
တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူသားတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အသိတရားနဲ့ အတွေးအမြင်တွေဟာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ၊ အကြောင်းအရာတွေကနေ ရရှိလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်များစွာထဲမှာ အားကစားလောကက အဖြစ်အပျက်တချို့ဟာလည်း အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
TOPSHOT – Denmark’s midfielder Christian Eriksen (bottom C) receives medical attention after collapsing on the pitch during the UEFA EURO 2020 Group B football match between Denmark and Finland at the Parken Stadium in Copenhagen on June 12, 2021. (Photo by Friedemann Vogel / various sources / AFP) (Photo by FRIEDEMANN VOGEL/AFP via Getty Images)
၂၁ ရာစုမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက လူငယ်အများစုဟာ အားကစားကဏ္ဍကို အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် သူတို့ရဲ့ Lifestyle ထဲကို ထည့်သွင်းလာကြပြီး အားကစားလောကက ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ အားကစားသမားတွေကို စံနမူနာယူကြလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က ယူရို ၂၀၂၀ EURO 2020 ပြိုင်ပွဲ အုပ်စု (B) အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြတဲ့ ဒိန်းမတ် Denmark အသင်း နဲ့ ဖင်လန် Finland အသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်ကနေရရှိလိုက်တဲ့ လူသားဆန်မှု၊ စည်းစနစ်ကျနပြီး နည်းပညာအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်နဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု စတာတွေကို လေ့လာသင်ယူလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
TOPSHOT – A Denmark fan holds up Denmark’s midfielder Christian Eriksen’s jersey during the UEFA EURO 2020 Group B football match between Denmark and Finland at the Parken Stadium in Copenhagen on June 12, 2021. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / POOL / AFP) (Photo by JONATHAN NACKSTRAND/POOL/AFP via Getty Images)
Eriksen ရဲ့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် Simon Kjær ရဲ့ ချီူးကျူးလေးစားဖွယ် လုပ်ရပ်များ
ဒိန်းမတ်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား အဲရစ်ဆင် Eriksen ဟာ ပထမပိုင်းပွဲပြီးခါနီး ပွဲချိန်ရဲ့ မိနစ် ၄၀ ကျော်မှာ နှလုံးအမောဖောက်ကာ ကွင်းအတွင်း ရုတ်တရက် လဲကျသွားခဲ့ပါတယ် ။ ကစားသမားချင်း ထိခိုက်မိပြီးရတဲ့ ဒဏ်ရာမျိုးမဟုတ်ပဲ ရုတ်တရက်လဲကျသွားတာဖြစ်လို့ ကွင်းအတွင်းက လူအားလုံးက မှင်သက်လျက်ရှိနေခဲ့ကြပါတယ် ။ ကွင်းလယ်ဒိုင် Anthony Taylor ဟာ အခြေအနေကို ရိပ်စားမိခဲ့တာကြောင့် ကစားပွဲကိုချက်ချင်းရပ်ကာ ဆေးအဖွဲ့ကို ချက်ချင်းခေါ်ယူစေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဒိန်းမတ်အသင်းခေါင်းဆောင် ဆိုင်မွန်ခါဂျာ Simon Kjær နဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ဟာ လဲနေတဲ့အဲရစ်ဆင်အနားကို အရင်ဆုံးသွားရောက်ပြီး ဆေးအဖွဲ့ကို စောင့်မနေတော့ပဲ ရှေးဦးသူနာပြုစုမှုတွေ လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ မျက်လုံးတောင်မမှိတ်ပဲ သတိလစ်သွားခဲ့တဲ့ အဲရစ်ဆင်ရဲ့ အခြေအနေဟာ အချိန်တိုအတွင်း အသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်လောက်တဲ့အထိ စိုးရိမ်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ခါဂျာက အဲရစ်ဆင် သတိလစ်ပြီး လျှာကို ပြန်မကိုက်မိအောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သလို မီဒီယာတွေရဲ့ ရိုက်ချက်ကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ တိုက်ရိုက်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်နေတဲ့ ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တွေကို ရိုက်မပြဖို့ တောင်းဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ဆေးအဖွဲ့ မရောက်လာသေးချိန်မှာတော့ ဒိန်းမတ်ကစားသမားတွေကို အဲရစ်ဆင်အနားမှာ ဒိုင်းသဖွယ် ပိတ်ဆို့ကာရံစေခဲ့ပါတယ်။
အသင်းခေါင်းဆောင် ခါဂျာရဲ့ ဒီတောင်းဆိုမှုဟာ လုံးဝမှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတဲ့ အများပြည်သူကြည့်ရှုရန် မသင့်တော်တဲ့မြင်ကွင်းတွေကို ပရိတ်သတ်တွေဆီ တိုက်ရိုက်အနီးကပ်မပြဖို့ လိုပါတယ် ။ ဒါဟာ အားကစားသမားတွေရဲ့ လုံခြုံမှုကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ကာကွယ်ပေးရာလည်းရောက်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အဆိုပါ အဖြစ်အပျက် ဖြစ်နေချိန်မှာ Live ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ ရုပ်သံအားလုံးက ကွင်းအတွင်းကို အဝေးမြင်ကွင်းနဲ့ပဲ ပြသပေးထားကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် UEFA အဖွဲ့ချုပ်ဟာ နောက်တစ်ရက်မှာပဲ ရိုက်ကူးရေးတွေအားလုံး အဲရစ်ဆင်ရဲ့ကိစ္စလို ဖြစ်ရပ်များ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ပါက အဝေးမြင်ကွင်းကိုသာရိုက်ကူးပြသဖို့ စည်းကမ်းဥပဒေအနေနဲ့ ထည့်သွင်း သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲရစ်ဆင်ကို အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်ဖို့ ရှေးဦးပြုစုမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ခါဂျာဟာ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ပြင်းထန်နေတဲ့ အဲရစ်ဆင်ရဲ့အမျိုးသမီးရှိရာ ကွင်းဘေးထံသို့ သွားရောက်ကာ အခြေအနေများကို ပြောပြပြီး အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ် ။ ခါဂျာနဲ့အတူ ဂိုးသမား Schmeichel ၊ အသင်းရဲ့နည်းပြ Hjulmand တို့ကလည်း ဘေးနားအတူရှိနေပြီး အားပေးစကားတွေ ဆက်တိုက်ပြောပေးနေခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်
TOPSHOT – Denmark’s goalkeeper Kasper Schmeichel (R) and Denmark’s defender Simon Kjaer (C) comfort Sabrina Kvist Jensen, partner of Denmark’s midfielder Christian Eriksen, after he collapsed on the pitch during the UEFA EURO 2020 Group B football match between Denmark and Finland at the Parken Stadium in Copenhagen on June 12, 2021. (Photo by WOLFGANG RATTAY / various sources / AFP) (Photo by WOLFGANG RATTAY/AFP via Getty Images)
Finland တိုက်စစ်မှူး Pohjanpalo နှင့် လေးစားဖွယ် Finland ပရိသတ်များ
ကွင်းထဲမှာ အဲရစ်ဆင်ရဲ့အသက်ကို ကယ်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ တစ်ဖက်အသင်းဖြစ်တဲ့ ဖင်လန်အသင်းရဲ့ ပရိသတ်တွေဟာလည်း ဒိန်းမတ်အသင်းရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့အတူ “Christian Eriksen” ရဲ့ နာမည်ကို သံပြိုင်ရွတ်ဆိုပြီး စိတ်ပူပန်စွာငိုကြွေးရင်း ဆုတောင်းပေးနေကြတာပါ။ ရှေးဦးသူနာပြုမှုတွေ ပြုလုပ်အပြီး သတိပြန်လည်လာတဲ့ အဲရစ်ဆင်ကို ကစားသမားတွေခြံရံပြီး ကွင်းထဲကဆေးခန်းကို သယ်ယူသွားချိန်မှာ ဖင်လန်ပရိသတ်က သူတို့ရဲ့အလံတွေကို ပစ်ချပြီး အဲရစ်ဆင်ရဲ့အခြေအနေကို အကာကွယ်ဖြစ်အောင် ကူညီခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒီအပြုအမူတွေမှာ ဘောလုံးပရိတ်သတ်များသာမက ကြားရမြင်ရသူတိုင်း ကြည်နူးဝမ်းသာစိတ် ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အခိုက်အတန့်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
Denmark’s players react as paramedics attend to Denmark’s midfielder Christian Eriksen after he collapsed on the pitch during the UEFA EURO 2020 Group B football match between Denmark and Finland at the Parken Stadium in Copenhagen on June 12, 2021. (Photo by Friedemann Vogel / POOL / AFP) (Photo by FRIEDEMANN VOGEL/POOL/AFP via Getty Images)
နှစ်ဖက်အသင်းကစားသမားတွေဟာ အဲရစ်ဆင် ဆေးရုံရောက်ရှိပြီး အခြေအနေပြန်လည်တည်ငြိမ်မှသာ ပွဲကိုဆက်လက်ကစားဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပြီး ပြန်လည်ကစားရန် ဒိန်းမတ်အသင်းသားတွေနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ကွင်းထဲဝင်ရောက်လာစဉ်မှာ ဖင်လန်အသင်းသားတွေနဲ့ ပရိသတ်က လက်ခုပ်တီးကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ပွဲစဉ်ကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာတော့ ဧည့်သည်အသင်းလည်းဖြစ်၊ အနိမ့်အသင်းလည်းဖြစ်တဲ့ ဖင်လန်အသင်းက ဦးဆောင် ဂိုးတစ်ဂိုးကို ရခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဂိုးကို ဖင်လန်တိုက်စစ်မှုး Phojanpalo က သွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဂိုးဟာ ဖင်လန်အသင်းအတွက် ယူရိုပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် ပထမဆုံးဂိုးဖြစ်ပေမယ့် တိုက်စစ်မှူး Phojanpalo ဟာ အဲရစ်ဆင် နဲ့ ဒိန်းမတ်အသင်းတွေအပေါ် လေးစားသမှုအနေနဲ့ အောင်ပွဲခံခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဖင်လန်တိုက်စစ်မှူး Phojanpalo ရဲ့ လူသားတိုင်း မလုပ်နိုင်တဲ့ လူသားဆန်မှုနဲ့ ဆင်ခြင်တွေးတောနိုင်မှုကတော့ တကယ့်ကို လေးစားစရာကောင်းလှပါတယ်။
Finland’s forward Joel Pohjanpalo celebrates at the end of the UEFA EURO 2020 Group B football match between Denmark and Finland at the Parken Stadium in Copenhagen on June 12, 2021. (Photo by Friedemann Vogel / POOL / AFP) (Photo by FRIEDEMANN VOGEL/POOL/AFP via Getty Images)
ဆုတောင်းသံများ နှင့် လူသားတို့ကမ္ဘာ
ဒီအဖြစ်အပျက်ကို သိရှိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကမ္ဘာ့တစ်ဝန်းမှ ဘောလုံးပရိတ်သတ်များစွာရဲ့ အဲရစ်ဆင်အတွက် ဆုတောင်းသံတွေဟာလည်း လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒိန်းမတ် နှင့် ဖင်လန် ပွဲစဉ်အပြီး ကစားခဲ့တဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံ Belgium နဲ့ ရုရှား Russia ပွဲစဉ်မတိုင်မီမှာ နှစ်ဘက်အသင်းကစားသမားများနဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ ကွင်းအတွင်း (၅) မိနစ် ငြိမ်သက်ကာ အဲရစ်ဆင် ကျန်းမာဖို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပြီး အဆိုပါပွဲမှာ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အဲရစ်ဆင်ရဲ့ အင်တာမီလန် Inter Milan အသင်းမှ ကစားဖော် လူကာကူ Romelu Lukaku ဟာလည်း ” Eriksen ငါ မင်းကိုချစ်တယ်” လို့ ကင်မရာရှေ့မှာ သွားရောက် ပြောကြားကာ အောင်ပွဲခံမှု ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခြားသော နိုင်ငံအသင်းတွေက အဲရစ်ဆင်ရဲ့ ကစားဖော်ဟောင်းတွေကလည်း လူကာကူလိုပဲ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
အဆိုးဆုံးအခြေအနေကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အဲရစ်ဆင်
ဒိန်းမတ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ပြန်ချက်အရ Eriksen ရဲ့ နှလုံးအမောဖောက်ဝေဒနာ ခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ နှလုံးခုန်မှန်စေဖို့ စက်ပစ္စည်းအကူအညီနှင့်အတူ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ဒိန်းမတ်နိူင်ငံရှိ Rigshospitalet ဆေးရုံမှ ဆင်းနိုင်ခဲ့ပြီဟု သိရပါတယ်။
Eriksen ဟာ ဆေးရုံက ဆင်းပြီးတဲ့နောက် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ Helsingør မြို့မှာရှိတဲ့ ဒိန်းမတ်အသင်းလေ့ကျင့်ရေးကွင်းဆီ သွားရောက်ကာ သူ့ရဲ့အသင်းသားတွေကို ကျေးဇူးတင်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Eriksen ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်သလို ဒိန်းမတ်အသင်းဟာလည်း အုပ်စုအဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီး အခုလာမယ့် ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့မှာ ကွာတားဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်ကို ချက် အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒိန်းမတ်အသင်း နဲ့ အဲရစ်ဆင် တို့ ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ ပုံမှန်ဘောလုံးပွဲစဉ်တစ်ခုကပေးတဲ့ ရသထက် ပိုတဲ့ သင်ခန်းစာတချို့ကိုပါ ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ ဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ဒီအခိုက်အတန့်တွေကို အမြဲတမ်း အမှတ်တရရှိနေမှာ အသေအချာပါပဲ။
အထူးသဖြင့် ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ သက်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ လူသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့အပြုအမူတွေ၊ မတူညီတဲ့နေရာဒေသမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ လူသားတွေဆီက တွေ့ရတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရား၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသမှု၊ လူသားချင်းစာနာဖေးမမှုနဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်တရား စတာတွေကိုပါ ဒီဖြစ်ရပ်ကနေ သင်ယူလေ့လာနိုင်လိုက်တဲ့အတွက် ၂၀၂၀ ယူရိုပြိုင်ပွဲမှ ဒိန်းမတ်နဲ့ ဖင်လန်အသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်က အားလုံးအတွက် ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်မယ့် ဘောလုံးပွဲစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ စိတ်ထဲမှာ စွဲကျန်ရစ်နေတော့မှာ အသေအချာပါပဲ။
Credit photo Getty
ထမင်းကြမ်း၊ ထမင်းကြော် စားတတ်သူများ သတိပြု ဆင်ခြင်ဖွယ်ရာ
ဆန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိက အစားအစာ ဖြစ်ပါတယ်။အာဟာရဓာတ်လည်း
ကြွယ်ဝသလို၊ ဓာတ် မတည့်တာမျိုးတွေလည်း တော်တော် ဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံး အဆင်ပြေပြေ စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဆန်ဟာ အထားအသို၊ စားသောက်ပုံမှားသွားခဲ့ရင် တော်တော် ဆိုးဆိုးရွားရွား ဒုက ္ခပေးနိုင်တယ်
ဆိုတာသိထားဖို့ အရမ်း အရေးကြီး ပါတယ်။တခါတလေအစားများသွားတဲ့ အခါ မျိုးတွေမှာ ဟင်းတွေထဲမှာ
ဓာတ်မတည့်တာမျိုးရှိနေလို့ပဲထင်တတ် ကြပေမယ့်တကယ်တန်းမှာ ဟင်းကြောင့် မဟုတ်ပဲ ထမင်းက
ဖြစ်နေတာမျိုးလဲ ရှိပါတယ်။ ဆန်ကို နည်းလမ်းမှန်စွာ မချက်ပြုတ်တဲ့ အခါ အစာ အဆိပ်သင့် တတ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈) ခုနှစ်အတွင်းက အမေရိကန်နိုင်ငံ Texas ပြည်နယ်က အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ (၈) ရက်တိတိ
အရေးပေါ် အနေနဲ့ ဆေးရုံ တက်ခဲ့ ရပါတယ်။အကြောင်းရင်း ကတော့ သူမဟာ ဘူဖေး ဆိုင်ကထမင်းကြော် စားမိ လိုက်လို့ပါ။
ထမင်းကြော်ဟာ ကြော်ပြီး အချိန် ကြာတာနဲ့ အမျှ
အခန်း အပူချိန်ကြောင့် ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အစာ အဆိပ် သင့်မှုတွေ ဖြစ်စေ ခဲ့တာပါ။ ဒါကို
Fried Rice Syndrome လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ထမင်းကြမ်း စားတတ်တဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ လည် ပြန်နွေးတဲ့ အခါမှာ ပူနွေးနေအောင် နွှေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်း အထူး သတိပြု ရပါမယ်။
ထမင်းကြမ်းပြန်နွှေးပြီးစားတတ် သူတွေ မှာလည်းအစာ အဆိပ်သင့်မှုတွေဖြစ်ပေါ် နိုင်တာကြောင့်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ထမင်းကြမ်းတွေကို မစားဘဲ နေရင် အကောင်းဆုံး ပါပဲ။ ထမင်းကို ရေခဲသေတ္တာ ထဲမှာ ပူနေတုန်း
မထည့်ဘဲ အအေးခံပြီးမှ ထည့်ပါ။ နောက်ပြီး ရေခဲသေတ္တာ ထဲမှာ တစ်ရက်ထက် ပိုကြာအောင် မထားရ ပါဘူး။
ထမင်းကို ပြန်နွှေးတဲ့ အခါ မှာလည်း ပူနွေး နေအောင် နွှေးရ ပါမယ်။ နောက်ပြီး ထမင်းကြမ်း တွေကို တစ်ခါထက်
ပိုပြီး လုံး၀ ပြန်မနွှေး သင့်တော့ သလို၊ စားလည်း မစားသင့် တော့ပါဘူး။
ထမင်း ကြမ်း တွေက အစာအဆိပ်သင့်မှုကို ဖြစ်စေနိုင် အိမ်ရှိ လူတွေနဲ့ ထမင်း ကို အံကိုက် အပို အလျှံ မရှိ ချက်ရတာ
မလွယ် ပါဘူး။ အမြဲ လိုလို ထမင်း က ကျန်လေ့ ရှိ ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကျန်တဲ့ ထမင်း ကို နောက်နေ့ မှာ မနက် စာ၊ နေ့လည်
စာ ပြန်စားလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲ့လို ကျန်တဲ့ ထမင်းကြမ်း တွေကို စားရင် အစာ အဆိပ် သင့်မှုကို ဖြစ်စေ နိုင်ပါတယ်။
မချက်ရ သေးတဲ့ ဆန်မှာ အစာ အဆိပ် သင့်မှု ကို ဖြစ်စေတဲ့ Bacillus Cereus ကို ထုတ်လုပ် ပေးနိုင်တဲ့ ဆဲလ်တွေ
ပါဝင် ပါတယ်။ Bacillus Cereusက ထမင်း ချက်ပြီး ရင်တောင် ရှင်သန် နိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာက ထမင်း ချက်ပြီး
ထမင်း တွေကို အခန်း အပူအချိန်မှာ ထားထား တာပါ။ အစာ အဆိပ် သင့်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယား တွေက
အခန်း အပူချိန် အတွင်း ပေါက်ဖွား လာပါ တယ်။
ဒါကြောင့် နောက်နေ့ ထမင်းအကျန်တွေ စားတဲ့အခါမှာ အစာအဆိပ်သင့်မှု ဖြစ်ရတာပါ။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်
အမျိုးသား ကျန်းမာရေးဌာနက ချက်ပြီးသား ထမင်းကို အခန်းအပူချိန် မှာ ၁ နာရီ ထက် ပိုပြီး မထားသင့်ဘူးလို့
ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် စားပြီး ချက်ခြင်း ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ပြီး သိမ်းထားရင် အစာအဆိပ်သင့်တာကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့
ပိုးမွှားတွေ ပေါက်တာကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်။
တုပ်ကွေးရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရန်နည်းလမ်းများ
ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါသည် တုပ်ကွေးရောဂါပိုး Type A နှင့် Type B ကြောင့်အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးရောဂါ လက္ခဏာများအနေဖြင့် ဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားများ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ လည်ချောင်း နာခြင်း၊ နှာရည်ယိုနှာစေးခြင်းတို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ဖျားနာခြင်းနှင့် အခြားလက္ခဏာများသည် ၇ ရက် တစ်ပါတ်အတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ချောင်းဆိုးခြင်းသည် ၂ ပတ်နှင့် အထက်ထိ မပျောက်ကင်းဘဲ ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့တွင်တော့ ရာသီတုပ်ကွေး၏ပြင်းထန်သော ရောဂါ လက္ခဏာများကို ခံစားရနိုင်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်၀န်ဆောင်များ၊ ၅နှစ် အောက် ကလေးငယ်များ၊ ၆၅ နှစ်နှင့် အထက်လူကြီးများ၊ နာတာရှည်ရောဂါအခံရှိသူများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုပေးနေသော ၀န်ထမ်းများသည် တုပ်ကွေး၏ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ ခံရနိုင်ခြေပိုများနိုင်ပါတယ်။
သင်နှင့် သင့်မိသားစုအတွက် တုပ်ကွေးရောဂါနှင့်၄င်း၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်များကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
တုပ်ကွေးရောဂါမှကာကွယ်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ နှစ်စဉ်တုပ်ကွေးကာကွယ် ဆေးထိုးထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့ COVID19 ဖြစ်ပွါးနေသောကာလမှာ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးထားဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးက COVID19 ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်မပေးနိုင်ပေမယ့် တုပ်ကွေး ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ဆေးရုံဆေးခန်းသွားရနိုင်ခြေတွေကိုလျော့ချပေးနိုင်လို့ ထိုးထားသင့်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအပြင် လက်မကြာခဏဆေးခြင်း၊ နှာချေချောင်းဆိုးလျင် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းကို အုပ်ထားခြင်းတို့ ပြုလုပ်ဖို့လည်းမမေ့သင့်ပါဘူး။
ကိုယ့်ပတ်၀န်းကျင်မှာဖျားနာနေတဲ့သူများရှိရင်ခပ်ခွါခွါနေပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်ဖျားနာနေရင်လည်း သီးသန့်နေပေး ခြင်း၊ လူကြားထဲသွားလာမှုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် မကူးစက်အောင် နေထိုင်ပါ။
3. ဖျားနာနေလျင် အိမ်တွင်အနားယူပါ။
ဖျားနာနေလျင် ရုံမသွားဘဲ ကျောင်းမသွားဘဲ အိမ်တွင်သာ အနားယူပါ။ ဒါမှသာ အခြားသူများကို ကူးစက်ပျံ့နှံ့ ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ကိုမကြာခဏဆေးကြောမှသာ ရောဂါပိုးမွှားများ မကပ်ညိအောင် မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမ၀င်ရောက်အောင် တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေ ဆပ်ပြာ အသုံးပြု၍နှစ်မိနစ်ခန့်သေချာစွာပွတ်တိုက်ဆေးကြောပါ။ ရေနှင့် ဆပ်ပြာမရရှိနိုင်ပါက အယ်လ်ကိုဟောပါ၀င်သော လက်သန့်ဆေးရည်များကို အသုံးပြုပါ။ တစ်စုံတစ်ခုကိုင်တွယ် ပြီးတိုင်းလက်ဆေးပါ၊ နှာချေ ချောင်းဆိုးပြီးတိုင်းလက်ဆေးပါ။
5. နှာချေ ချောင်းဆိုးလျင် နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်ကို ဖုံးအုပ်ထားပါ။
နှာခြေ ချောင်းဆိုးလျင် ပါးစပ်ကို တစ်ရှူး (သို့) လက်ကိုင်ပုဝါ (သို့) တံတောင်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးပါ။ ရာသီတုပ်ကွေး နှင့် ကိုဗစ်ကဲ့သို့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ ကူးစက်တတ်သောရောဂါများသည် နှာခြေချောင်းဆိုးခြင်းမှ တစ်ဆင့် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်ပါတယ်။
အသားငါး ဟင်းသီးဟင်းရွက် အသီးအနှံ အမျှင်ဓာတ်များအားလုံး စုံလင်မျှတအောင်စားသောက်ပါ။ သန့်ရှင်းလက်ဆတ်သော အစားများကို ပူပူနွေးနွေးချက်ပြုတ်စားသောက်ပါ။ ရေများများသောက်ပေးပါ။ အချို နှင့် အငန်ဓာတ်ကိုလျော့စားပါ။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြင့်တက်စေမည့် ဗီတာမင်စီ၊ ဇင့်၊ ဆယ်လီနီယမ်၊ ဗီတာမင်ဒီ တို့ကိုပြည့်၀စွာရရှိပါစေ။ အိပ်ရေး၀၀အိပ်စက်အနားယူပါ။ တစ်နေ့ တစ်နာရီခန့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလည်း ပြုလုပ်ပါ။
တုပ္ေကြးေရာဂါကို ကာကြယ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္နည္းလမ္းမ်ား
ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါသည္ တုပ္ေကြးေရာဂါပိုး Type A ႏွင့္ Type B ေၾကာင့္အျဖစ္မ်ားတတ္ပါတယ္။ တုပ္ေကြးေရာဂါ လကၡဏာမ်ားအေနျဖင့္ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ႂကြက္သားမ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း နာျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုႏွာေစးျခင္းတို႔ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ အျခားလကၡဏာမ်ားသည္ ၇ ရက္ တစ္ပါတ္အတြင္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းေလ့႐ွိပါတယ္။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသည္ ၂ ပတ္ႏွင့္ အထက္ထိ မေပ်ာက္ကင္းဘဲ ၾကာ႐ွည္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိဳ႕တြင္ေတာ့ ရာသီတုပ္ေကြး၏ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားကို ခံစားရႏိုင္ၿပီး အသက္ဆုံး႐ႈံးသည္အထိျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား၊ ၅ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား၊ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္လူႀကီးမ်ား၊ နာတာ႐ွည္ေရာဂါအခံ႐ွိသူမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေ႐ွာက္မႈေပးေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တုပ္ေကြး၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ခံရႏိုင္ေျခပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္။
သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ၎၏ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာသင့္ပါတယ္။
တုပ္ေကြးေရာဂါမွကာကြယ္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကေတာ့ ႏွစ္စဥ္တုပ္ေကြးကာကြယ္ ေဆးထိုးထားဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ COVID19 ျဖစ္ပြါးေနေသာကာလမွာ တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးထားဖို႔ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးက COVID19 ကူးစက္မႈကို ကာကြယ္မေပးႏိုင္ေပမယ့္ တုပ္ေကြး ရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြ ေဆး႐ုံေဆးခန္းသြားရႏိုင္ေျခေတြကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္လို႔ ထိုးထားသင့္ပါတယ္။ တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းအျပင္ လက္မၾကာခဏေဆးျခင္း၊ ႏွာေခ်ေခ်ာင္းဆိုးလ်င္ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းကို အုပ္ထားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ဖို႔လည္းမေမ့သင့္ပါဘူး။
ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာဖ်ားနာေနတဲ့သူမ်ား႐ွိရင္ခပ္ခြါခြါေနပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ဖ်ားနာေနရင္လည္း သီးသန္႔ေနေပး ျခင္း၊ လူၾကားထဲသြားလာမႈေ႐ွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ မကူးစက္ေအာင္ ေနထိုင္ပါ။
3. ဖ်ားနာေနလ်င္ အိမ္တြင္အနားယူပါ။
ဖ်ားနာေနလ်င္ ႐ုံမသြားဘဲ ေက်ာင္းမသြားဘဲ အိမ္တြင္သာ အနားယူပါ။ ဒါမွသာ အျခားသူမ်ားကို ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
လက္ကိုမၾကာခဏေဆးေၾကာမွသာ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား မကပ္ညိေအာင္ မိမိခႏၶာကိုယ္ထဲမ၀င္ေရာက္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရ ဆပ္ျပာ အသုံးျပဳ၍ႏွစ္မိနစ္ခန္႔ေသခ်ာစြာပြတ္တိုက္ေဆးေၾကာပါ။ ေရႏွင့္ ဆပ္ျပာမရ႐ွိႏိုင္ပါက အယ္လ္ကိုေဟာပါ၀င္ေသာ လက္သန္႔ေဆးရည္မ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ တစ္စုံတစ္ခုကိုင္တြယ္ ၿပီးတိုင္းလက္ေဆးပါ၊ ႏွာေခ် ေခ်ာင္းဆိုးၿပီးတိုင္းလက္ေဆးပါ။
5. ႏွာေခ် ေခ်ာင္းဆိုးလ်င္ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္ကို ဖုံးအုပ္ထားပါ။
ႏွာေျခ ေခ်ာင္းဆိုးလ်င္ ပါးစပ္ကို တစ္႐ွဴး (သို႔) လက္ကိုင္ပုဝါ (သို႔) တံေတာင္ျဖင့္ ဖုံးအုပ္ေပးပါ။ ရာသီတုပ္ေကြး ႏွင့္ ကိုဗစ္ကဲ့သို႔ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းမွ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားသည္ ႏွာေျခေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ပါတယ္။
အသားငါး ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ အသီးအႏွံ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားအားလုံး စုံလင္မွ်တေအာင္စားေသာက္ပါ။ သန္႔႐ွင္းလက္ဆတ္ေသာ အစားမ်ားကို ပူပူေႏြးေႏြးခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ပါ။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးပါ။ အခ်ိဳ ႏွင့္ အငန္ဓာတ္ကိုေလ်ာ့စားပါ။ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကိုျမင့္တက္ေစမည့္ ဗီတာမင္စီ၊ ဇင့္၊ ဆယ္လီနီယမ္၊ ဗီတာမင္ဒီ တို႔ကိုျပည့္၀စြာရ႐ွိပါေစ။ အိပ္ေရး၀၀အိပ္စက္အနားယူပါ။ တစ္ေန႔ တစ္နာရီခန္႔ ကိုယ္လက္လႈပ္႐ွားမႈလည္း ျပဳလုပ္ပါ။
ဟား (၅)ကောင်အဖွဲ့ကို KNU က ဖမ်း ထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှားကို ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ လူရွှင်တော်တိုင်းကျော်
June 29, 2021 by Shwengwe Games
ပြည်သူချစ် လူရွှင်တော်တွေဖြစ်ကြတဲ့တိုင်းကျော် ဝိုင်းကျော် ပိုးလေး ပြည်ကျော်နဲ့တိုးကျော်တို့ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့မှ စတင်ကာပြည်သူတွေနဲ့ အတူတစ်သားထဲရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။
တစ်ချိန်ကပြည်သူတွေကို ရယ်မောစေခဲ့တဲ့ ပျက်လုံးတွေနဲ့ ဟား၅ကောင်အဖွဲ့ကတော့ပြည်သူနဲ့တစ်သားထဲ ရပ်တည်ကာ အာဏာရှင်စနစ်ကို တော်လှန်ဆန့်ကျင်လျက်ရှိကြပါတယ်။
ပြည်သူ့အတွက်ဟား(၅)ကောင်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို အမြဲလက်ကိုင်ထားတဲ့ ညီအကို၅ယောင်ကတော့ တကယ်ပဲ ပြည်သူအတွက် ပြည်သူတွေနဲ့ပဲရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်ခုမှာ စစ်အာဏာရှင်ကို လက်နက်ဆွဲကိုင်တော်လှန်ရန်သင်တန်းတက်လျက်ရှိပြီး onlineပေါ်မှ ၅ရက်ခန့် ပျောက်ကွယ်နေတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး KNU မှ ဖမ်းဆီးထားပြီး ဖုန်းတွေသိမ်းတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှားတွေ ပြန့်နှံ့နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာသတင်းအမှားတွေ ထွက်နေတဲ့အပေါ် ဟား(၅)ေကာင်အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူတိုင်းကျော်မှယခုလိုဖြေရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။”အခုဖုန်းသိမ်းသွားလို့ ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးနေတာပါဆို(လခွမ်း) ငါ့နှယ်မေ့လို့ ကြိုးတုပ်ဖို့နေနေသာသာ KNU က ငါတို့ကိုချစ်လိုက်တာတုန်နေတာဘဲကျွန်တော့်မိသားစုတွေများများ ရှဲပေး “ပါဆိုပြီးပရိတ်သတ်တွေကိုအမှန်တရားကို ချပြလာခဲ့ပါတယ်။
Source – Taingkyaw’s Facebook
ဟား (၅)ေကာင္အဖြဲ႕ကို KNU ကဖမ္း ထားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမွားကို ေျဖရွင္းလိုက္တဲ့ လူ႐ႊင္ေတာ္တိုင္းေက်ာ္
ျပည္သူခ်စ္ လူ႐ႊင္ေတာ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ တိုင္းေက်ာ္ ဝိုင္းေက်ာ္ ပိုးေလး ျပည္ေက်ာ္နဲ႕တိုးေက်ာ္ တို႔ကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္ေန႕မွ စတင္ကာ ျပည္သူေတြနဲ႕ အတူ တစ္သားထဲရပ္တည္လ်က္ရွိပါတယ္။
တစ္ခ်ိန္က ျပည္သူေတြကို ရယ္ေမာေစခဲ့တဲ့ ပ်က္လုံးေတြနဲ႕ ဟား၅ေကာင္အဖြဲ႕ကေတာ့ ျပည္သူနဲ႕တစ္သားထဲ ရပ္တည္ကာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ဆန့္က်င္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။
ျပည္သူ႕အတြက္ ဟား(၅)ေကာင္ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို အၿမဲလက္ကိုင္ထားတဲ့ ညီအကို၅ေယာင္ကေတာ့တကယ္ပဲ ျပည္သူအတြက္ ျပည္သူေတြနဲ႕ပဲ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါတယ္။လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတစ္ခုမွာစစ္အာဏာရွင္ကို လက္နက္ဆြဲကိုင္ေတာ္လွန္ရန္ သင္တန္းတက္လ်က္ရွိၿပီး onlineေပၚမွ ၅ရက္ခန့္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနတာနဲ႕ပက္သက္ၿပီးKNU မွဖမ္းဆီးထားၿပီး ဖုန္းေတြသိမ္းတယ္ဆိုတဲ့သတင္းအမွားေတြ ျပန့္ႏွံ႕ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာ သတင္းအမွားေတြ ထြက္ေနတဲ့အေပၚ ဟား(၅)ေကာင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ တိုင္းေက်ာ္မွယခုလိုေျဖရွင္းျပလာခဲ့ပါတယ္။ ”အခုဖုန္းသိမ္း သြားလို႔ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ သုံးေနတာပါဆို(လခြမ္း ) ငါ့ႏွယ္ ေမ့လို႔ ႀကိဳးတုပ္ဖို႔ေနေနသာသာ KNU က ငါတို႔ကိုခ်စ္လိုက္တာတုန္ေနတာဘဲကြၽန္ေတာ့္မိသားစုေတြမ်ားမ်ား ရွဲေပး “ပါဆိုၿပီးပရိတ္သတ္ေတြကိုအမွန္တရားကို ခ်ျပလာခဲ့ပါတယ္။
၄နှစ်တိတိ စောင့်မျှော်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ထွက်ရှိလာတော့မယ့် Fast & Furious9ဇာတ်လမ်း
၄နှစ်တိတိ စောင့်မျှော်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ထွက်ရှိလာတော့မယ့် Fast & Furious9ဟာ မြေပြင်ပေါ်မှာ ကားမောင်းရတာ အားမရလို့ တကယ်ပဲ အာကာသထဲအထိ သွားကြတော့မလားဆိုတာတော့ ရင်ခုန်စရာပါ။ Trailer ထဲမှာတော့ Roman Pearce နဲ့ Tej Parker တို့ကို အာကာသဝတ်စုံတွေနဲ့ တွေ့လိုက်ကြပြီးပါပြီ။
ဒီတစ်ခေါက်အပိုင်းမှာ လူ​တော်​တော်များများ ချစ်ကြတဲ့ မင်းသားကြီး Dwayne Johnson (The Rock) ပါဝင်လာခြင်းမရှိပေမယ့် WWE ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်တဲ့ John Cena ကိုတော့ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Shaw ကြောင့် သေဆုံးခဲ့တဲ့ Han ကလည်း ဒီကားမှာ Come Back အနေနဲ့ ပြန်ပါလာမှာပါ။ သူဘယ်လိုပြန်ရှင်လာသလဲ ဆိုတာကတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့မှပဲ သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးပျံနှံ့မှုကြောင့် ရုံတင်ရက်ကို အကြိမ်ကြိမ်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပြီး နိုင်ငံတကာပရိသတ်များနဲ့ ရုပ်ရှင်သုံးသပ်သူတွေကတော့ Paul Walker ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့​နောက် အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားတဲ့ Rating ကို ပြန်လည်ထိန်းလိုက်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
Fast & Furious လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းပြေးမြင်မိတဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင် Dom (Dominic Toretto) ဟာ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ဘယ်လိုအရှုပ်အထွေးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာလဲ? ဘယ်လို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ Street Racing တွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်သွားမှာလဲဆိုတာကို ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှား‌စွာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရဦးမှာပါ။ Dom ဟာ အပြင်ပန်းအရခက်ထန်ပေမဲ့ အဖွဲ့သားတွေအပေါ်မှာ ဂရုတစိုက်နဲ့ ချစ်ခင်တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် မိသားစုအ​ပေါ်မှာလည်း အင်မတန် သံယောဇဉ်ကြီးမားတဲ့သူပါ။
တရားမဝင် Mission တွေရော၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် Mission တွေမှာပါ ပါဝင်ပြီးတဲ့နောက် ကားလောကကနေ အနားယူပြီး မိသားစုနဲ့အတူ အေးချမ်းစွာနေထိုင်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ မမျှော်လင့်ဘဲ အရှုပ်အထွေးတွေကြားထဲမှာ ပါ၀င်လာရပြန်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်သူရင်ဆိုင်ရမှာက သူ့ရဲ့ညီ Jakob ပါ။ ဒီတော့ ပရိသတ်ကိုအမြဲရင်ခုန်သံမြန်စေတဲ့ Fast and Furious ရဲ့ အမိုက်စားရိုက်ချက်တွေ၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်း အင်ဂျင်သံတွေနဲ့အတူ နောက်ထပ် ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာကြမလဲဆိုတာ ပိတ်ကားထက်မှာ စောင့်ကြည့်ကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယှဉ်ပြိုင်မှုကြီးမားတဲ့ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်လောကမှာ Fast and Furious ဟာ ဘာကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာအောင် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့လဲဆိုတာ တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ရအောင်။ ဇာတ်အိမ်ခိုင်မာတာ၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေ ဆွဲဆောင်မှုရှိတာကလည်း Fast and Furiousရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သလို အဓိကဇာတ်ကောင် Dom ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုနဲ့လည်း အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။ Dom ဟာ ပိတ်ကားထပ်မှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရတဲ့ အက်ရှင်ရိုက်ကွက်တွေကို ထိထိမိမိလုပ်ဆောင်ပြနိုင်တဲ့အတွက် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းက မျက်တောင်တစ်ချက်မခတ်ဘဲ ကြည့်ရင်း အားကျခဲ့ရတဲ့သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့သားတွေအပေါ် အမြဲဉီးစားပေးသလို ချစ်ခင်ကြင်နာတတ်ပြီး ပြဿနာတစ်ခုခုကို အမြန်ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတာရယ်၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသတာရယ်ကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားကို ဆယ်စုနှစ်နှစ်စုကြာအောင် ဖမ်းစားထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၀၁ ခုနစ်ကနေ ယနေ့ထိတိုင်အောင် Fast and Furious ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့အတူ Dom ဟာလည်း Fan တွေရဲ့ အသည်းစွဲ Role Model အဖြစ် စွဲမြဲထင်ကျန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဆယ်စုနှစ်၂ခုကျော်ကြာတဲ့အထိ အအောင်မြင်ဆုံး Franchise တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့တဲ့ Fast and Furious နဲ့အတူ ကြီးပြင်းလာရတဲ့အတွက် အခုထွက်ရှိလာမယ့် F9 ကိုလည်း ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်နေမိပါတယ်။
၄ႏွစ္တိတိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ထြက္႐ွိလာေတာ့မယ့္ Fast & Furious9ဇာတ္လမ္း
၄ႏွစ္တိတိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ထြက္႐ွိလာေတာ့မယ့္ Fast & Furious9ဟာ ေျမျပင္ေပၚမွာ ကားေမာင္းရတာ အားမရလို႔ တကယ္ပဲ အာကာသထဲအထိ သြားၾကေတာ့မလားဆိုတာေတာ့ ရင္ခုန္စရာပါ။ Trailer ထဲမွာေတာ့ Roman Pearce နဲ႔ Tej Parker တို႔ကို အာကာသဝတ္စုံေတြနဲ႔ ေတြ႕လိုက္ၾကၿပီးပါၿပီ။
ဒီတစ္ေခါက္အပိုင္းမွာ လူ​ေတာ္​ေတာ္မ်ားမ်ား ခ်စ္ၾကတဲ့ မင္းသားႀကီး Dwayne Johnson (The Rock) ပါဝင္လာျခင္းမ႐ွိေပမယ့္ WWE ၾကယ္တစ္ပြင့္ျဖစ္တဲ့ John Cena ကိုေတာ့ ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Shaw ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့တဲ့ Han ကလည္း ဒီကားမွာ Come Back အေနနဲ႔ ျပန္ပါလာမွာပါ။ သူဘယ္လိုျပန္႐ွင္လာသလဲ ဆိုတာကေတာ့ ႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္ရင္းနဲ႔မွပဲ သိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုဗစ္ေရာဂါပိုးပ်ံႏွံ႔မႈေၾကာင့္ ႐ုံတင္ရက္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံတကာပရိသတ္မ်ားနဲ႔ ႐ုပ္႐ွင္သုံးသပ္သူေတြကေတာ့ Paul Walker ကြယ္လြန္သြားခဲ့တဲ့​ေနာက္ အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားတဲ့ Rating ကို ျပန္လည္ထိန္းလိုက္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။
Fast & Furious လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းေျပးျမင္မိတဲ့ အဓိကဇာတ္ေကာင္ Dom (Dominic Toretto) ဟာ ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း ဘယ္လိုအ႐ႈပ္အေထြးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာလဲ? ဘယ္လို ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ေကာင္းတဲ့ Street Racing ေတြနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္သြားမွာလဲဆိုတာကို ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္႐ွား‌စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈရဦးမွာပါ။ Dom ဟာ အျပင္ပန္းအရခက္ထန္ေပမဲ့ အဖြဲ႕သားေတြအေပၚမွာ ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ ခ်စ္ခင္တတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့အျပင္ မိသားစုအ​ေပၚမွာလည္း အင္မတန္ သံေယာဇဥ္ႀကီးမားတဲ့သူပါ။
တရားမဝင္ Mission ေတြေရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ Mission ေတြမွာပါ ပါဝင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကားေလာကကေန အနားယူၿပီး မိသားစုနဲ႔အတူ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္သြားဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေပမဲ့ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အ႐ႈပ္အေထြးေတြၾကားထဲမွာ ပါ၀င္လာရျပန္ပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္သူရင္ဆိုင္ရမွာက သူ႕ရဲ႕ညီ Jakob ပါ။ ဒီေတာ့ ပရိသတ္ကိုအၿမဲရင္ခုန္သံျမန္ေစတဲ့ Fast and Furious ရဲ႕ အမိုက္စား႐ိုက္ခ်က္ေတြ၊ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း အင္ဂ်င္သံေတြနဲ႔အတူ ေနာက္ထပ္ ဘယ္လိုေတြဆက္ျဖစ္လာၾကမလဲဆိုတာ ပိတ္ကားထက္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႀကီးမားတဲ့ အေမရိကန္႐ုပ္႐ွင္ေလာကမွာ Fast and Furious ဟာ ဘာေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့လဲဆိုတာ တစ္ခ်က္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ ဇာတ္အိမ္ခိုင္မာတာ၊ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ေတြ ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိတာကလည္း Fast and Furiousရဲ႕ အားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္သလို အဓိကဇာတ္ေကာင္ Dom ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီးသက္ဆိုင္ပါတယ္။ Dom ဟာ ပိတ္ကားထပ္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးထင္ရတဲ့ အက္႐ွင္႐ိုက္ကြက္ေတြကို ထိထိမိမိလုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္တဲ့အတြက္ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝတုန္းက မ်က္ေတာင္တစ္ခ်က္မခတ္ဘဲ ၾကည့္ရင္း အားက်ခဲ့ရတဲ့သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဖြဲ႕သားေတြအေပၚ အၿမဲဉီးစားေပးသလို ခ်စ္ခင္ၾကင္နာတတ္ၿပီး ျပႆနာတစ္ခုခုကို အျမန္ပိုင္းျခားဆုံးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း႐ွိတာရယ္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီသတာရယ္ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ႏွလုံးသားကို ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စုၾကာေအာင္ ဖမ္းစားထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၁ ခုနစ္ကေန ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ Fast and Furious ႐ုပ္႐ွင္ကားေတြနဲ႔အတူ Dom ဟာလည္း Fan ေတြရဲ႕ အသည္းစြဲ Role Model အျဖစ္ စြဲၿမဲထင္က်န္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ဆယ္စုႏွစ္၂ခုေက်ာ္ၾကာတဲ့အထိ အေအာင္ျမင္ဆုံး Franchise တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ေနခဲ့တဲ့ Fast and Furious နဲ႔အတူ ႀကီးျပင္းလာရတဲ့အတြက္ အခုထြက္႐ွိလာမယ့္ F9 ကိုလည္း ရင္ခုန္စြာနဲ႔ ေစာင့္ေနမိပါတယ္။
နောက်ဆုံးခရီး လိုက်မပို့နိုင်ခဲ့ပေမယ့်…ရက်လည်နေ့မှာ ရေမွန်‌ေနခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းလေးကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် လိမ္မော်သီး
ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အဆိုတော် လိမ္မော်သီးကတော့ ထူးခြားတဲ့အသံပါဝါကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီး သီချင်းတွေကို အင်အားအပြည့်နဲ့ သီဆိုတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ယနေ့အချိန်အထိတိုင်အောင် သီချင်းတွေအများအပြား ဖန်တီးခဲ့တဲ့ လိမ္မော်သီးက တစ်ကိုယ်တော်အခွေတွေလည်း ထွက်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင်လိမ္မော်သီးက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူမရဲ့ညီမလေးဝေလာရီနဲ့ ဆိုရင်လည်း သီချင်းတွေဖန်တီးပြီး အတူတူသီဆိုခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီနေ့လေးမှာ လိမ္မောသီးက မကြာခင် ရက်ပိုင်းက ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ရေမွန်ရဲ့ တိုက်ခန်းလေးကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြလာပါတယ် ။ ဒီနေ့ဆိုရင် ရေမွန်ကွယ်လွန်သွားတာ ရက်လည်နေ့လေးလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ရေမွန်ရဲ့ ရက်လည်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ အမှတ်တရ တွေပြည့်နေတဲ့ အခန်းထဲက အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ် ။
ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ” နောက်ဆုံးခရီး လိုက်မပို့နိုင်ခဲ့ပေမယ့်… ရက်လည်တော့ရောက်ခဲ့တယ်… ကိုကြီး အေးချမ်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်ရှိနေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်… ငြိမ်းချမ်းပါစေကိုကြီး …. ” ဆိုတဲ့ စာလေးကိုလည်း ဝမ်းနည်းကြောင်း အမှတ်တရရေးသားဖော်ပြထားရာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာ အမှန်ပါပဲနော် ။ ရေမွန်လည်း ကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
ေနာက္ဆုံးခရီး လိုက္မပို႔ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္…ရက္လည္ေန႔မွာ ေရမြန္‌ေနခဲ့တဲ့တိုက္ခန္းေလးကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ လိေမၼာ္သီး
ပရိသတ္ေတြခ်စ္ခင္အားေပးရတဲ့ အဆိုေတာ္ လိေမၼာ္သီးကေတာ့ ထူးျခားတဲ့အသံပါဝါကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္ၿပီး သီခ်င္းေတြကို အင္အားအျပည့္နဲ႔ သီဆိုတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ယေန႔အခ်ိန္အထိတိုင္ေအာင္ သီခ်င္းေတြအမ်ားအျပား ဖန္တီးခဲ့တဲ့ လိေမၼာ္သီးက တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြေတြလည္း ထြက္႐ွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္လိေမၼာ္သီးက ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သူမရဲ႕ညီမေလးေဝလာရီနဲ႔ ဆိုရင္လည္း သီခ်င္းေတြဖန္တီးၿပီး အတူတူသီဆိုခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ဒီေန႔ေလးမွာ လိေမၼာသီးက မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းက ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ေရမြန္ရဲ႕ တိုက္ခန္းေလးကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပလာပါတယ္ ။ ဒီေန႔ဆိုရင္ ေရမြန္ကြယ္လြန္သြားတာ ရက္လည္ေန႔ေလးလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ေရမြန္ရဲ႕ ရက္လည္ေန႔မွာ သူ႕ရဲ႕ အမွတ္တရ ေတြျပည့္ေနတဲ့ အခန္းထဲက အမွတ္တရပုံရိပ္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပလာတာျဖစ္ပါတယ္ ။
ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူ ” ေနာက္ဆုံးခရီး လိုက္မပို႔ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္… ရက္လည္ေတာ့ေရာက္ခဲ့တယ္… ကိုႀကီး ေအးခ်မ္းတဲ့ဘုံဘဝေရာက္႐ွိေနမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္… ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစကိုႀကီး …. ” ဆိုတဲ့ စာေလးကိုလည္း ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အမွတ္တရေရးသားေဖာ္ျပထားရာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတာ အမွန္ပါပဲေနာ္ ။ ေရမြန္လည္း ေကာင္းရာ သုဂတိလားပါေစ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ ။